Indlela yokukhetha umfazi
Kukho uluvo lokuba amadoda akangxamanga ukudala intsapho kwaye ayanqika ukutshata. Kukho izizathu ezininzi zezi zinto, enye yazo ingxaki yokukhetha. Abafazi bahlala bexhomekeka kwiimvakalelo, amadoda alawulwa ngqiqo. Kunzima indoda ukuba isenze isigqibo esibalulekileyo, sithembele kuphela kwiimvakalelo. Mhlawumbi yeso sizathu sokuba abantu bazive bekholose kuphela xa benokukhetha kunye nethuba lokuthelekisa. Kodwa akukho mfihlelo ekungabikho ukuphosakela kunye nokukhethwa okokuqala okokuqala. Ufuna ukuphulaphula wena kunye neengcebiso zeengqondo zengqondo.
1) Nika iinjongo.
Ewe, wonke umntu uthanda. Omnye uthanda ama-blondes kuphela, kunye nomntu nje ohlakaniphile, umntu ufuna umfazi wezoqoqosho, kunye nomntu onomfazi. Kodwa kufuneka siqonde ukuba ukuphishekela iphupha kungathatha iminyaka, kwaye ngeli xesha ininzi yamantombazana iya kudlula, leyo ingaba yinto yokwenene, eyonwabileyo. Ukukhangela umfazi onokuba ngumfazi, akufuneki ukuphatha indlela ozivakalelwa ngayo ngokufumana imoto entsha. Umntu ophilayo akanako ukuba nayiphi iparameters ecacileyo engayi kutshintsha ngexesha. Akunabantu abangenasiphako. Ukuba umntu uyazi kwaye akayiyo eyakhe, uya kwamkeleka iimpazamo kwintombi ethandekayo ngaphandle kwamabango. Kwaye oku kuthetha ukuba le ndoda inethuba lokujonga ngokwenene izinto kunye nobudlelwane.
2) Se benzisa ingqiqo.
Intsapho yokomelela okwenene ayenzekanga ngaphandle kothando. Kodwa uthando olunye alukho isiqinisekiso sovuyo. Ukukhetha umngane wobomi, zigqibo kuqala ngeminqweno yakho nemigaqo.
Ukuba unethemba, umntu onokuvuya onomdla, intombi e-melancholic ayiyi kuba yinto ekhethekileyo. Omnye wenu uya kuhlekisa, okwesibini uya kugxeka ngamahlaya, ukuba ukuthula kunye nokuqonda okufanayo ngeke kudibanise.
Ukuba uyaluxabisa intuthuzelo ebomini bemihla ngemihla, kuyafaneleka ukuba uhlole ubunzima bobufazi bezoqoqosho. Akufuneki ukuba ngumpheki omkhulu-emva koko konke, ukuba ufuna, unokufunda yonke into, kodwa umnqweno wakhe nomnqweno wokulungisa ubomi, ukugcina umyalelo kunye nococeko yinto oyifunayo.
Kubaluleke kakhulu ukuba amadoda namabhinqa abaneembono ezifanayo kungekhona kuphela kubomi ngokubanzi, kodwa nakwizinto eziphathekayo ngokukodwa. Ngokomzekelo, indoda iyaphatha abafazi ngokuhlonela, iyaziqonda amalungelo abo okusebenza kwaye iphumelele, umntu ujwayele ukuzifumana aze axabise ukuzimela nokuzimela kubantu. Akunakwenzeka ukuba uya kuthanda umfazi onqwenela ukuyeka umsebenzi wezobugcisa ekuthandeni intsapho, umntu onjalo ulahleka ngokukhawuleza. Kubalulekile ukuthelekisa isimo sengqondo sakho ngemali. Ukuba umntu uyasiphazamisa, kwaye isibini isipelisi, oku kuya kuba yimbangela enkulu yokuxabana.
Akukho nentsapho inokuzaliswa ngaphandle kwabantwana. Ngabantwana abadibanisa indoda kunye nomfazi, benze enye. Ngoko ke, kubaluleke kakhulu ukuba imbono malunga nemiba ephathelele kubantwana kunye nokukhuliselwa kwabo kuhambelana nomyeni nomfazi. Akudingeki ukuba zifane ngokufanayo, kodwa kungcono ukuba unamathela zombini kwiindlela ezifanayo zokuba ngumzali. Ukongezelela, ukuba elinye iphupha lentsapho enkulu, kwaye omnye nomntwana kuphela umthwalo, ukuxabana kulo mhlaba akunakuphetshwa.
Enye yezona ndlela zisebenzayo zokuqinisekisa ukuba zakho iingcamango malunga nomfazi kufuneka wazi kakuhle intsapho yakhe. Bathi ukuba ukuqonda uhlobo luni lomfazi oluya kuba seminyaka engama-20, kufuneka ukhangele unina. Esi sisitatimende esilungileyo. Ngokuqinisekileyo, akufanele ucinge ukuba ibhinqa liya kuba yinyani engumama wayo, kodwa siyikopishe ngokungabikho ukuziphatha kwabantu abahlala nabo kunye nokwakha intsapho kwimodeli ayibonayo ukususela ebuntwaneni. Ngako oko, umntu uyakwazi ukubona nokuqonda okuninzi, ekuxubeni kunye neentsapho zomntu ozenza isenzo kwisandla nangentliziyo. Indlela kwintsapho yabo ukujongana ngayo, ninyamekele omnye nomnye kwaye ncedise, iya kuba nefuthe kulwalamano lwakho.
Kodwa ukuzama ukukhetha umfazi obalaseleyo kwihlabathi, kubalulekile ukuba ungaphuthelwa yinto enokuba kude neengcamango zakho malunga nokuba ngubani umfazi ongcono. Akunakwenzeka njalo ukubala zonke izinto kwihlabathi kwaye kunzima ukuqikelela ukuba ubuhlobo bakho buya kuba njani emva kweminyaka emininzi. Ngokuhamba kwexesha, sitshintshile, iimvakalelo zethu kunye nezinto eziphambili ziza kutshintshwa, ngoko ungazami ukufuna iingeniso zangexesha elide, njengawe esitolo. Ukuba nithandana, unombono ofanayo ngobomi kunye nezinto ezibalulekileyo kuyo, ukuba unemiqondo efanayo malunga nekamva kunye neenjongo ezifanayo, ngoko kukho amathuba amaninzi okuya kuvuya. Ekugqibeleni, amabali ayaziwa imizekelo apho indoda nomfazi bephikisana ngokupheleleyo, kodwa bahlala ndawonye ngothando kunye nokuvisisana iminyaka emininzi.
Ukuthandana nomtshato: umdlalo wokudlala
Qalisa ngokufanelekileyo ubomi bentsapho
Indlela yokuvuma kumntu othandweni, ukuba usemkhosini?
Uthando luni na "iifomudo"
U-Alena Vodonaeva utshitshise ngokudubula kwiiphini zangaphantsi
I-Mackerel ibhaka nge-anyanisi kunye nemon
Ilanga e-bhanki: zokupheka ezifanelekileyo ze-apricot jam
Imichilo ezandleni: izilwanyana zomntu
6 Izinto ezibalulekileyo zeMpilo yabasetyhini
Ukulahleka kweenwele ngenxa yokutshintsha kwe-hormone
Ukutya ukutya kunye nokuzilolonga
Uncedo kakhulu kwaye awukho ngaphantsi kwee-cottage cheese muffins. Zokupheka zokupheka
Ephakathi kwendawo yokuhlala kwisitayela seRoma
Isiqwenga sephupha lokugqibela. Ikhonkco ibonakala ngathi ngathi?
Uncedo lokuqala lokuqhawula umntwana
Izindlela zokuqinisa izipikili